Indawo yokubaleka eLochside eHighland Perthshire
I-East Craig Cottage likhaya eliyilwe ngumyili kwiindonga zeLoch Rannoch. Nokuba ufuna ukuhamba, ukuqubha, okanye ukurhona nje ngesitovu somlilo kwaye uthathe indawo entle ekwindawo ephakamileyo, le ndlu sisiseko esifanelekileyo. Iindwendwe zingonwabela ulwandle lwase-East Craig Cottage lwabucala.
Indawo yokulala ingaphezulu kwemigangatho emibini. Kumgangatho ophantsi kukho ikhitshi, igumbi le-boot, igumbi lokuhlambela kunye negumbi lokulala eliphindwe kabini. Umgangatho wokuqala unendawo yokuhlala enkulu evulekileyo evulekileyo, ilungele ukutya kunye nokuzipholela.
Indawo yokuhlala ekumgangatho wokuqala inesofa enkulu, isitovu esibaswa ngamaplanga, indawo yokutyela / indawo yokusebenzela, kunye nembono yepanoramic- ngeefestile zemifanekiso ezithatha ubude bepropathi - ukuya eLoch Rannoch kunye neentaba ezingaphaya. Ibhaskithi enye yezigodo iya kubonelelwa ngokuhlala kwakho. Nceda uqaphele ukuba akukho TV.
Igumbi lokulala linebhedi ephindwe kabini, i-wardrobe, kunye neengcango eziphindwe kabini ngaphandle kwindawo yepatio enendawo yomlilo, isitovu esibaswa ngamaplanga, kunye nezinyuko eziya kunxweme lwabucala.
Igumbi lokuhlambela likufuphi negumbi lokulala kwaye lisanda kulungiswa.
Ikhitshi linezinto zonke eziyimfuneko. Kukho umatshini wokuhlamba kunye nesomisi kwakhona.
Igumbi le-boot yeyona ndawo ifanelekileyo yokutshintshela ngaphandle kwe-wellies yakho kwaye uxhome i-mac yakho, ngelixa ubonelela ngendawo eyaneleyo yokugcina iibhayisekile kunye nezinye izixhobo zangaphandle.
Igadi ifikelela ezantsi kwi lochside. Nceda uqaphele kwakhona kukho indawo ethambekileyo ecaleni kwegadi apho unokuphehlelela khona isikhephe seseyile okanye esibheqayo ukuba uza naso.
Ungena kwipropati phezu kwegrid yeenkomo kwindawo yokumisa izithuthi. Nceda uqaphele ukuba kukho izitepsi ezisezantsi ukuya kumnyango wangaphambili wepropathi.
Ibekwe kwindawo eyaziwayo yoBubuhle beNdalo obuBabekileyo, uya kujikelezwa yenye yezona ndawo zintle kakhulu eSkotlani inokubonelela.
IKinloch Rannoch ekufutshane inevenkile yelali, ivenkile yekofu, igalari kunye neehotele ezimbini ezineendawo zokutyela. Ukusuka kwi-East Craig Cottage, ukwabekwe kakuhle kakhulu ukuba undwendwele iRannoch Tea Room eyaziwayo ngesilayi esikhulu sekeyiki kwesinye sezikhululo zikaloliwe ezikude onokuthi undwendwele!
Iidolophu eziphakamileyo zasePitlochry kunye ne-Aberfeldy zifikeleleka ngokulula kwaye zibonelela ngokukhetha iikhefi, iivenkile ezizimeleyo kunye neendawo zokutyela. Ukuthenga indawo ethe ngcu kwindawo ephezulu kunye neholo yokutya elungiselelwe kakuhle inokufumaneka kwiNdlu ehlala idumile yaseBruar.
Kwabo bangafuniyo ukuhamba mgama ukusuka eMonti Craig Cottage, unokuqala usuku ngokuqubha eLoch Rannoch; phambi kokuphosa intambo yetrout kwaye emva koko ubukele ii-osprey zisiya kuloba ngokwazo. Ngorhatya oluzolileyo, isibhakabhaka esihle esineenkwenkwezi zaseRannoch sisondeza imini ekupheleni.
Ngexesha lokuhlala kwakho, iindwendwe zinikwa amalungelo eRiparian, akuvumela ukuba ulobe kwiLoch ukusuka kunxweme lwabucala lweCottage. Abakhweli beebhayisikile abanomdla baya kuba nomdla wokwazi ukuba i-East Craig Cottage ikwindlela yase-Etape Caledonia ngokwayo.
Uya kuba ngummelwane wethu. I-East Craig izimele ngokupheleleyo, ifikeleleka ngomnyango wayo wangaphambili. Siza kufumaneka kwifowuni ukuphendula nayiphi na imibuzo. Ukuba kuyafuneka, siyakwazi ukubonelela ngolwazi kwindawo yendawo kwaye siya kwenza konke okusemandleni ethu ukwenza ukuhlala kwakho kube ngokukodwa. Izinja eziziphethe kakuhle zamkelekile - nceda usazise ukuba uzisa kwaye siza kulungelelanisa iibhedi & nezitya.
Uya kuba ngummelwane wethu. I-East Craig izimele ngokupheleleyo, ifikeleleka ngomnyango wayo wangaphambili. Siza kufumaneka kwifowuni ukuphendula nayiphi na imibuzo. Ukuba kuyafune…